यहाँ 10 तरिकाहरू छन् जुन तपाईंले भिजुअल सामग्रीसँग संलग्नता बढाउन सक्नुहुन्छ | Martech Zone
हाम्रो पुन: डिजाइन र सामाजिक एकीकरणमा एक प्रमुख रणनीति दृश्य सामग्रीमा फोकस गरिएको छ। हाम्रो साइट मा गुणवत्ता इन्फोग्राफिक्स साझा गर्न हाम्रो पहुँच आसमान छ र मलाई प्रत्येक शेयरको साथ तिनीहरूमा सामग्री छलफल गर्न अनुमति दिन्छ। क्यान्भाबाट यो इन्फोग्राफिक फरक छैन - कसैलाई हिंड्नको लागि विभिन्न तरिकाहरूबाट तपाईंले दृश्य सामग्री बनाउन सक्नुहुन्छ। र म उनीहरूले प्रदान गर्ने सल्लाहको मुख्य अंशलाई म सराहना गर्दछु:
दृश्य सामग्रीले तपाईंलाई तपाईंको सन्देश अनुकूलित गर्न स्वतन्त्र शासन दिन्छ, बिभिन्न तरिकाहरू र माध्यमहरू तपाईंको सन्देश पाउनका लागि प्रयोग गर्नुहोस्, यो वास्तवमै असीमित उपयोगी उपकरण हो।
भेदभाव यस्तो कुञ्जी अनलाइन हो। जब हामी लेख पछि लेख लेख्छौं, हामीले यत्ति धेरै मेहनत गर्नुपर्दछ कि यसलाई हजारौं अन्य लेखहरू जुन वेबमा प्रत्येक दिन प्रकाशित हुन्छन्, भन्दा फरक पार्नुपर्दछ। एउटा कुञ्जी भिजुअल थप्नुहोस्, यद्यपि लेखले तपाइँको आगन्तुकहरूको साथ पूर्ण नयाँ छाप छोड्छ। त्यो मात्र हो, यो साझेदारी त्यो लेखको तेजी बाट बढ्छ।
यस इन्फोग्राफिकमा, क्यानभा तपाईंलाई देखाउँछ १० प्रकारका अद्भुत दृश्य सामग्री तपाइँको ब्रान्ड अहिले नै सिर्जना गर्नुपर्दछ:
आँखा कैच गर्ने फोटोग्राफहरू - 93%% खरिदकर्ताहरूले भन्छन् कि छविहरू # १ निर्णायक कारक हुन् जब उत्पादनहरू खरीद गर्दा।
प्रेरणादायक उद्धरण कार्डहरू - उद्धरणले तपाईंको मान झल्काउँछ, सिर्जना गर्न सजिलो हुन्छ, र अत्यधिक साझेदारी योग्य हो।
कार्य गर्न कडा कल - of०% व्यवसायको कुनै पनि कलमा कार्यको अभाव छ यद्यपि दर्शकहरूले अत्यधिक सम्भावना देखाएमा।
ब्रान्ड गरिएका छविहरू - विस्तृत र ब्रान्डित छविहरूको प्रयोगले तपाईंलाई% 67% बढी दर्शकहरूको ध्यान प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
चाखलाग्दो डाटा दृश्य - %०% व्यक्तिहरू जवाफ दिन्छन् र दृश्य जानकारीलाई सादा पाठ भन्दा राम्रोसँग बुझ्दछन्।
संलग्न भिडियोहरू - केवल%% साना व्यवसायले तिनीहरूलाई प्रयोग गर्दछन्, तर% 9% उपभोक्ताहरू भिडियो हेरेपछि खरीद गर्न बढी झुकाव राख्छन्।
सुझावहरू, युक्तिहरू, र कसरी गर्ने - तपाईंको उत्पादको लागि मूल्य र प्रयोग प्रदान गर्दछ र अधिकार निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ।
जानकारीमूलक स्क्रीनशटहरू -% 88% व्यक्ति समीक्षा गर्न पढ्छन् 'व्यवसायको गुणवत्ता निर्धारण गर्न, तपाईंको समीक्षाको स्क्रिनसट लिनुहोस्!
प्रश्न प्रश्नहरू सोच्दै - साझेदारी, कुराकानी, सगाई र ब्रान्ड जागरूकता प्रोत्साहित गर्दछ।
Infographics - त्यहाँ एक कारण छ Highbridge धेरै इन्फोग्राफिक्स उत्पादन गर्दछ हाम्रो ग्राहकहरु को लागी! तिनीहरू to गुणा बढी साझा हुन सक्ने सम्भावना हुन्छन् र व्यवसायहरू इन्फोग्राफिक्स रिपोर्ट प्रयोग गर्नेहरू भन्दा १२% बढी नाफा रिपोर्ट गर्छन्।
खुलासा: म एक सम्बद्ध हुँ क्यानभा र म यस लेखमा मेरो सम्बद्ध लिंक प्रयोग गर्दैछु।
टैग: ब्रान्डेड छविहरुCanvaआकर्षक भिडियोहरुकसरीइंफोग्राफ़कअनौपचारिकफोटोहरूफोटोप्रश्नउद्धरण कार्डस्क्रिनसटहरूचालहरूदृश्य सामग्री को प्रकारहरुभिडियोदृश्य ग्राफिक
सेप्टेम्बर 14, 2017 मा 6: 56 AM
राम्रो लेख र इन्फोग्राफिक। भिजुअल सामग्री र मुद्रण सामग्रीले अरूलाई हाम्रो व्यापार सन्देश पठाउन धेरै प्रभाव पार्छ।